Lettre du Président de la République adressée à S.E. M. Andry Rajoelina (...) - La France à Madagascar
Accueil > Actualités > Toutes les actualités > Lettre du Président de la République adressée à S.E. M. Andry Rajoelina (...)
(texte ci-dessous en Français et en Malgache)
Parisy, faha 14 janoary 2019,
Ho an’Andriamatoa Filoham-pirenena ,
Amin’ny anarako manokana sy amin’ny anaran’ny vahoaka frantsay manontolo dia faly miarahaba anao ny tenako amin’izao nahavoafidy anao ho filoham-pirenena izao. Amin’io safidy io, ny vahoaka Malagasy dia nampisongadina mazava tsara ny fanantenana napetrany taminao.
Tsapako ny hagoavan’ny fanamby izay tsy maintsy hatrehan’i Madagasikara mandritra ny taona maro ho avy , mba hiantohana ny fampandrosoana ara-toekarena ary hamongorana ny fahantrana. Tiako ny hanamafy ny fanohanan’i Frantsa, izay mpiara-miombon’antoka ara-tantara, mpifanolo-bodirindrina ary naman’i Madagasikara, amin’ny fanavaozana izay hataonao mba hahatratrarana ireo tanjona ireo. Matokia ianao fa manana finiavana ny tenako hanamafy ny fifandraisantsika ara-politika, fa koa ny lafiny ara-toekarena sy ara-kolontsaina, izay mifototra amin’ny fifandraisana mafy orina ara-tantara sy ara –olombelona.
Misaotra betsaka amin’ny fanasana ny tenako hanatrika ny lanonam-pianianana izay hatao any Antananarivo ny 19 Janoary ho avy izao . Saingy tsy afaka manatrika izany ny tenako. Ny Sekreteram-panjakana ao amin’ny Minisitry ny Eoropa sy ny Raharaham-bahiny, Atoa Jean-Baptiste LEMOYNE, no hisolo tena ahy mandritra ny lanona. Ny tenako kosa dia faly handray anao aty Parisy, hanamafy sy hanome aina vaovao ny fiaraha-miasa antsika.
Mamerina ny fiarahabana feno atolotro ho anao Andriamatoa Filoham-pirenena, sy ny firariantsoa fahombiazana amin’izay rehetra atao ./.